Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka socota Magaalada Baydhabo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka socota Magaalada Baydhabo
Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka socota Magaalada Baydhabo
Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay waxaa ka socota doorashada kuraas kamid ah golaha Shacabka, waxaana goordhow la doortay kurisgii ugu horreeyay ee doorashada maanta,iyada oo qorsuhu yahay in la doorto ilaa lix kursi.
Kursiga Koowaad ee Hop#099 ee Golaha Shacabka ayaa waxaa maanta ku guuleystay Wasiirka Qorsneynta Maamulka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuunow oo uu dhalay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka dowladdii KMG aheyd ee Madoobe Nuunoow Maxamed, wuxuuna helay codad gaaraya 75-cod halka musharaxii la tartamayey Cabdinasir Ibraahim Aadan 25-cod.
Kursiga labaad ee Hop#168 oo uu ku fadhiyay Xasan Macalin Xuseen ayaa waxaa ku guuleysatay Luul Ibraahim Cumar oo heshay 86-cod halka musharaxii la tartamaysay Nasteexo Axmed Nuur ay heshay 15-cod, waxaana kursigaan markii hore sidoo kale loo diiwaangeliyay laba musharrax oo rah ah balse tartanka ay isaga hareen.
Kusriga Sddexaad ee Hop#167 ayaa waxaa ku guuleystay Cabdisalaan Cali Cabdi, isaga oo heley codad gaaraya 74-cod halka musharaxii la tartamayay Cabdi Maxamuud Maxamed uu heley 23-cod, waxaana kursigaan horay ugu fadhiyay Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen (Badni).
Kursiga Afaraad ee Hop#077 oo uu ku fadhiyay Isgoowe deeroow Isaaq balse meesha laga saaray ayaa waxaa Maanta ku guuleystay Maxamed Sheekh Cabdulaahi Ciirow oo ah Taliyaha qeybta 60aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo heley codad gaaraya 83-cod halka musharaxii la tartamayay Cabdinaasir Cali Xasan uu heley 13-cod, waxaana halaabay hal Cod.
Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka socota Magaalada Baydhabo was last modified: March 9th, 2022 by warsan radio
DFS oo sheegtay in dagaal lagu qabtay Saraakiil katirsan Al-Shabaab
Meydka Taliyihii hore ee Ciidamada Booliska General Axmed Jaamac oo lagu aasay Muqdisho
Akhriso:-Kala-Fadhigii 4aad ee Aqalka Sare oo Maanta Furmay